Git 2.32 na-abịa na ụfọdụ ndozi, ụzọ nchedo na ndị ọzọ | Site na Linux
Git 2.32 na-abịa na ụfọdụ ndozi, ụzọ nchedo na ndị ọzọ
Mgbe ọnwa atọ nke mmepe ya e kpughere mwepụta nke ọhụrụ ụdị nke ewu ewu na-ekesa isi iyi usoro Nnukwu 2.32. Tụnyere ndị gara aga version, 617 mgbanwe nakweere na ụdị ọhụrụ ahụ, kwadebere na nsonye nke ndị mmepe 100, nke nke 35 sonyere na mmepe ahụ maka oge mbụ.
Maka ndị na-amaghị Git i kwesịrị ịma na nke a bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu na version akara usoro, a pụrụ ịdabere na ya ma rụọ ọrụ dị elu, na-enye mgbanwe mmepe na-abụghị linear development based based on branching and merging.
Iji hụ na akụkọ ihe mere eme iguzosi ike n'ezi ihe na iguzogide mgbanwe "ochie", a na-eji mkpofu akụkọ ihe mere eme nke ọ bụla eme ihe ọ bụla, ọ ga-ekwe omume iji akara ngosi nke dijitalụ nke mkpado ndị mmadụ na ndị mmepe.
Git 2.32 Key New Atụmatụ
Ọhụrụ a version kama nke usoro GIT_CONFIG_NOSYSTEM nke a na-eji zere ịgụ faịlụ nhazi site na usoro niile, ugbu a A na-atụle iji usoro GIT_CONFIG_SYSTEM, nke na-enye gị ohere ịkọwapụta nke ọma na nke faịlụ a ga-ebuba nhazi niile, yana oke GIT_CONFIG_GLOBAL iji kpochapụ ntọala onye ọrụ akọwapụtara na $ OMLỌ / .git mgbe ị na-agbanwe agbanwe GIT_CONFIG_SYSTEM.
Mgbanwe ọzọ emere bụ na ugbu a mgbe ejiri usoro nke abụọ nke usoro nkwukọrịta Git, mgbe ị na-emezu "git push", a na-emezu nkọwa ahụ na na-anata ọgwụgwụ, nke mere ka o kwe omume iweta arụmọrụ nke "git push" n'ogo nke "git ọchụchọ»Ma wepu nbudata ihe ndi a choro.
Nhọrọ "-ihe nkiri [= ] "Agbakwunyela na iwu" git commit ", Kedu na-eme ka ọ dị mfe itinye gị onwe gị ahaziri ozi na isi / uru usoro n'elu nkwenye, nke ahụ nwere ike isi ya site na iwu «ịkọwa-trailers".
Ọ bụkwa kwuru na nhọrọ «–Jụ-miri emi"ka"gee clone»Iji gbanyụọ ọnọdụ nchekwa na-emighị emi cloning (enweghị akụkọ mgbanwe zuru oke), gbakwunyere ọnọdụ email zoo na gitweb, nke na-anọchi eriri eriri email na mmepụta.
Usoro nhazi nke iwu «git tinye –3way«, Nke ugbu a nke mbụ na-agba mbọ itinye ụzọ atọ jikọrọ algorithm ma ọ bụrụ na ọdịda ma ọ bụ esemokwu na-alaghachi na ngwa ngwugwu a na-ahụkarị (na mbụ ọ bụ ụzọ ọzọ gburugburu).
Agbakwunyere nhọrọ «–Diff-merges =»Iji« iwundekọ git»Na log.diffMerges ntọala ịhọrọ ọnọdụ ndabara, yana a mgbakwunye nchebe na "git tinye" na iwu "git rm" megide mgbanwe nke data na ụzọ gasị na-abụghị akụkụ nke ọrụ ịkwụsasịa ọrụ.
Nhọrọ "–Filter = ihe: ụdị =»E tinyekwara na« iwugit rev-ndepụta»Iji wepu otu ụdị ihe na faịlụ ngwugwu site na iwu ahụ mkpọ-ihe.
A naghị anabata ụkpụrụ ọjọọ ihe ndi ozo maka nhọrọ ndị na-ewere ụkpụrụ ọnụọgụ, dị ka -window na -depth.
Na iwu «git itinye»Ekwe ka ezipụta nhọrọ«–3ụzọ»Na«-Ichere" n'otu oge ahụ.
Iwu "git ime»Nwere ogologo version nke« –fixup »nhọrọ (-emepụta a nkwa maka« rebase –autosquash »).
Iwu "zipu ozi-e»Elebara anya na nhazi nke core.hooksPath.
A na-anabata ọnụọgụ ndị na-abụghị ọnụ ọgụgụ usoro ga-patch -v .
Agbakwunyere interface IPC dị mfe iji mepụta ọrụ dị ka fsmonitor.
Nhazi faịlụ kwụsịrị ».gitattributes "," .gitignore "na" .mailmap»Ọ bụrụ na ha bụ njikọ ihe atụ.
Maka njem HTTP, agbakwunyela nkwado maka ikpuchi paswọọdụ ejiri nke ọma ịmepe asambodo.
Iwu "git stash na-egosi»Nwere ikike iji gosipụta akụkụ a na-ewepụghị nke ụlọ ahịa faịlụ nchekwa nwa oge.
Achọpụtala atụmatụ dị elu iji weghachite ebe nchekwa ihe site na iji iwu «git nkwụghachi«, Nke na-enye ohere iji belata oriri nke ihe onwunwe n’oge ịghaghachi.
Finalmente ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịmatakwu banyere ya banyere ụdị ọhụrụ a, ị nwere ike ịlele nkọwa na njikọ na-esonụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Na-atụ aro » Git 2.32 na-abịa na ụfọdụ ndozi, ụzọ nchedo na ndị ọzọ
TOS-P1: Explochọgharị ebe dị ukwuu Tencent Open - Nkebi 1
SOS-P1: Inyocha Samsung Open Source - Nkebi 1